आत्मबल कसरी बढाउने ? – BRTNepal
बिआरटीनेपाल २०७६ चैत १० गते १९:५३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, मलाई एउटा साथीले फोनमा भन्यो, ‘मेरो छाती भारी हुन्छ । निद्रा लाग्दैन, डर लाग्छ । केही भइहाल्ला कि भनेर तर्सन्छु । के गर्ने होला ?’ उनी ठुलो होटेलका साहु हुन् । कोरोनाको त्रास बढेपछि होटेल बन्द गरे ।
हामी सतर्क भइराख्यौँ भने भाइरस त एक दिन परास्त भइहाल्छ तर त्यति बेलासम्म नकारात्मक सोच र व्यवहारले हामी मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर हुनेछौँ। त्यसबाट मुक्ति मिल्न झन् मुस्किल पर्न सक्छ। त्यसैले कोरोनाबाट बच्नजत्तिकै दिमागलाई शान्त राख्न सजग हुनुपर्ने भइसकेको छ। त्यसका लागि चिकित्सककहाँ जानुपर्दैन, औषधि खानुपर्दैन। मात्र आफ्नो सोचाइ र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याए पुग्छ।
हामी पोखरीमा, नदीमा हाम्फाल्छौं भने पौडिन्छौँ, हात–खुट्टा चलाउँछौँ। यति गरिएन भने डुब्छौँ भन्ने हामीलाई थाहा छ। ठ्याक्कै त्यस्तै कोरोनाबाट बच्ने तरिका छन्। घरमै बसियो भने कोरोना आफैँ आउँदैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले दिएका सुझाव पालना गरे पुग्छ। प्रलय आउँछ, जान्छ। भूकम्प आयो, गयो। यसरी सोच्नुपर्छ।
जुन चिजले दिमागलाई नकारात्मक बनाउँछ, त्यो गर्नुभएन। जस्तो ः चौबिसै घण्टा कोरोनाबारे अपडेट भइरहनु आवश्यक छैन। समाचारमा कोरोना, युट्युब–फेसबुकमा कोरोना, साथीसँग कुराकानी गर्दा पनि कोरोना भयो भने दिमागमा असर गर्छ नै। कोरोनाले संक्रमण भएको, मरेको हेर्‍यो– थाहा पायो, त्यसमै आत्तिन्छौँ। यो थाहा पाउँदैमा संक्रमणबाट बचिने वा अरू फाइदा हुने होइन। त्यसैले सामान्य जानकारीबाहेक कोरोनासम्बन्धी समाचारलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ। छिन छिनको चासो घातक हुन्छ। सामाजिक सञ्जाललाई आफन्तसँग सम्पर्क गर्न सकिने माध्यमका रूपमा मात्र प्रयोग गरौँ, न कि सूचनाको स्रोत।
सामान्य अवस्थामा पनि शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नुपर्छ। यस्तो प्रकोप र तनावका बेला थप ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थबर्द्धक खानेकुरा खानुपर्छ। दिनमा कम्तीमा तीन लिटर पानी पिउनुपर्छ। खाएर मात्र हुँदैन, सुत्नुपर्छ। कोरोनाको नकारात्मक सामग्री हेरिरह्यो भने निद्रा लाग्दैन तर आठ त घण्टा सुत्नैपर्छ। व्यायाम एकदमै आवश्यक छ। घरको सरसफाइ गर्ने, वरपर हिँड्ने, आफूलाई सक्रिय राख्ने गर्नुपर्छ। तनाव भयो भन्ने बहानामा रक्सी, कफी खानुहुन्न। यसले त चिन्ता घटाउने होइन, झन् बढाउँछ।
यति गर्दा पनि निद्रा लागेन के गर्ने? जब तनाव महसुस हुन्छ, आँखा चिम्लेर लामो श्वास तान्ने, एकदेखि दशसम्म गन्ने अनि बिस्तारै छोड्ने गर्नुपर्छ। हातलाई छातीमाथि राखेर शरीरको हरेक गतिविधिमा एकाग्र भइयो, महसुस गरियो भने मन हल्का हुन्छ। दिनमा कम्तीमा दस पटक यस्तो गर्ने बानी बसालौँ।
दिमागमा कोरोना–कोरोना भयो भने त्यसबाट ‘डिस्ट्र्याक’ हुनै पर्छ। १ देखि १०० सम्म गन्ने, अनि १०० बाट उल्टो गन्दै ल्याउने अभ्यास प्रभावकारी हुन्छ। पुरै ध्यान गन्नमै लगाउनुपर्छ। युट्युबमा दिमाग शान्त बनाउने अनेक तरिका सिकाइएको भिडियो हुन्छन्, तिनलाई पछ्याउनु उपयुक्त हुन्छ।
आम मान्छेमा सकारात्मक भाव र आत्मबल बढाउन मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले अखबार, अनलाइन टेलिभिजन हेर्दा लाग्छ, दुनियाँमा कोरोनाको त्रासबाहेक केही छैन। मन हल्का बनाउने कन्टेन्ट असाध्यै कम छन्। जस्तो : कोरोनालाई जितेकाहरूको कथाले धेरैलाई राहत दिन्छ। उसको भोगाइ पढ्दा आत्मविश्वास बढ्छ। चीनमा कोरोना पोजेटिभ भएकाहरूले अहिले स्वयंसेवीको काम गरिरहेका छन्। वृद्धवृद्धा पनि सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् तर यस्ता समाचारले कम प्राथमिकता पाउँछ।
हामीमध्ये धेरैलाई के लागेको छ भने त्यति विकसित र सिस्टम भएको युरोपमा त्यति धेरै मान्छे मरिरहेका छन् भने हामीकहाँ के होला? हरेक पल यस्तै भयले सताइरहेको हुन्छ तर त्यसरी सोच्नुहुन्न। झन्डै ९० प्रतिशत मान्छे त ‘रिकभर’ भइरहेका छन्। फेरि कहाँ के भयो भनेर चिन्ता लिने होइन, आफू सतर्क हुने हो। हामीले थाहा पाइसक्यौँ कि यो हावामा उडेर आउँदैन। कोरोना महामारीबारे चाहिनेबाहेक अरू कुराको पछि नलागौँ।
# कान्तिपुर दैनिकबाट